Umhla My Pet » Iingcebiso Ukuthandana Tinder neZinye Apps Mobile
Kukho ixesha xa ukuya kumhla, abantu ababini kwafuneka ngamnye komnye umntu; ngoko ke ukuthandana online; yaye ukuthandana ngoku intanethi isebe elitsha, niyathandana ngokusetyenziswa mobile.
Isibini lokugqibela leminyaka abakubonileyo ngokusesikweni eziliqela apps ezifana; nto intle uninzi lwabo apps kukuba zingakotshwa ngekhompyutha simahla iindleko.
Nangona Tinder mhlawumbi yeyona ithandwayo ezamahala ukuthandana app, kukho abanye abaninzi ngohlobo lwayo ekwasetyenziselwa kakhulu ngokubanzi; Imizekelo iquka Ihenjisi, OkCupid, Coffee Udibana Bagel, Neentlanzi ezininzi, kwaye nangokunjalo.
Ngezantsi kukho ezinye iingcebiso umntu ekufuneka uyilandele xa uthandana kunye Tinder nezinye apps mobile.
Khethela i iifoto ekunene: Kufuneka uthabathe ifoto yakho ngobunono nokuba le app ukuthandana xa usebenzisa; ifoto elungileyo yindlela omkhulu ebamba imfutshane namaqabane ukuthandana enokwenzeka. nokuba, ukuba imifanekiso kunene kuba kubaluleke kakhulu ukuba usebenzisa Tinder, nto leyo app photo-based.
on Tinder, amathuba akho okufumana ngqo- zixhomekeke kakhulu kwimifanekiso zakho kwiprofayile. A picture iprofayili embi kunokukunqanda kwimidlalo yakho abasuka nomdla ngakumbi kuwe.
Ngokunqwenelekayo, umfanekiso iprofayili lokuqala ukulayisha kwi Tinder kufuneka ifoto enomtsalane kobuso bakho, umfanekiso iprofayili yesibini ukubonisa ngesithomo yakho kwaye elesithathu unako ukubonisa indlela wakho okanye ngendlela yokuzonwabisa oyithandayo.
Enye into fanele senze, ingakumbi ukuba umfazi, lowo ufaka iifoto uzibone itakane; selfies ngeposi kwaye samasi Tit-badubule kufuneka kuphetshwe.
Lumka xa ukubhala inkcazo iprofayile yakho: Xa lula ukuthandana, umele ungaze uzame ukudala aura ongaqondakaliyo ngeenxa ngokwakho.
Khumbula ukuba nangona usebenzisa app abathandanayo, injongo yakho ephambili kwiintlanganiso abantu ubuso ngobuso; ukuze, akukho ingongoma elele okanye abonakale wena njengomntu awuka.
Ukuba yonke into ngawe akulungile, yenza uluhlu izibakala ezininzi umdla ngawe uziquke inkcazo iprofayile yakho. Musa ukuthandabuza ukubonisa lwefacade alucelomngeni ebomini bakho, Umzekelo, ukuba une umsebenzi umdla okanye ngendlela yokuzonwabisa oyithandayo, ukuthetha ngayo ngokweenkcukacha.
Umntu unokuba olugoso encinane kakhulu njengoko abantu ngentwana wit kusoloko zithandwa ngakumbi.
azisoloko ziphendula: Ufumene umyalezo Tinder (okanye nayiphi na enye app ukuthandana mobile usebenzisa), kodwa umntu ukuthumela umyalezo alibonakali bebamb 'ukuba kakhulu. Kwiimeko ezinjalo, endaweni zokuphepha ngokuthumela mpendulo, uze uwuyeke omnye umntu ukuba awunamdla.
Funda ngexesha imiyalezo yakho: Le incam kubalulekile ingakumbi kwabasetyhini; nokuba, phantsi kweemeko ezithile, abantu kufuneka balumke malunga nexesha lemiyalezo Bathumela.
Ukuba oko ngempelaveki, abasetyhini kufuneka kukuphepha ukusungula iphulo ngefowuni emva 10 ebusuku, bayayenza kuphela xa bejonge uzidibanisa.
Ithemba la macebo kukunceda ufumane umdlalo obufezekileyo Tinder okanye nayiphi na enye app ukuthandana mobile kwimisebenzi ngoku. Kanye qinisekisa awufuni bangabangxameli izinto kakhulu; sikhumbule yakudala: “ecothayo ngcembe ophumelela ugqatso”.